သငျသညျသွား Displacement အဘို့အရန် anchor စနစ်များကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါဘူးအရာများအတွက်ထိရောက်တဲ့ protocol ကို.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယူထားတဲ့ဧရိယာထဲမှာ Register နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုကသင်တန်းအတူလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်စတင်ခဲ့သည်,.
မပြီးဆုံးလိုက်တဲ့ကုသမှုပြီးသွား၏အမှု၌ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာဖုံးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ကျိုး၏အမှု၌ Setup ကိုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မျက်နှာဖုံးများ.
Hotline WhatsApp ကို
သင်တို့သည်ငါတို့၏အစဉ်အမြဲရရှိနိုင်ဖုန်းနံပါတ်ဖို့ခြေရာများ၏ဓါတ်ပုံများကိုပေးပို့နှင့်အတူတူပင်၏အရည်အသွေးပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင့်မေးခွန်းများအဖြေရနိုင်, တိုက်ရိုက်ထဲမှာ high resolution ကတော့ Monitor ပေါ်မှာထိန်းချုပ်ထားလိမ့်မည်သည့်; လူနာလေ့လာမှုဆဲနေစဉ်.
အကောင်အထည်ဖော်မှုအကူအညီနှင့် POST PRODUCTION
Setup ကို con ကဗီဒီယို, စြေးထား, အစဉ်အမြဲအခမဲ့ valet. ကျနော်တို့ကိုလည်းအမှု၏တိုးတက်မှုကာလအတွင်းမည်သည့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်.
ဆင်း Market ခန်းမ Kit
ကုသနောက်ထပ်’ Ultra Transparency နဲ့အတူ attachment မျက်နှာဖုံးများမရှိဘဲနဲ့တိကျမှန်ကန်ပြီး Fast
တိုင်းခြေလှမ်းနဲ့ဖိအားအချက်များမှာအလင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တပ်ဖွဲ့များ transmit လုပ်ဖို့ align အပို UP နှင့် UP ၏နှစ်ဆအစုံနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော် Biomechanics (DIVOT) မိသားစု’ မျက်နှာဖုံး align မိုနိုအပေါငျးတို့သအလွန်တရာအရေးကြီးတယ်လျှော့ချရန်ကုမ္ပဏီဖွငျ့. ပူးတွဲမှုမပါဘဲ extrusions နှင့်လည့်အတူ. ပိုကောင်းတဲ့လူနာလိုက်နာမှုနှင့်ပိုမိုချောမွေ့ကျန်းမာရေးမျက်နှာဖုံးများ, သည် "ပြုံးနေ Glass ကို" နည်းပညာကိုကျေးဇူးတင်.